Myanmar: Kufsi aan caddaalad helin iyo mudaharaadyo ka dhashay - BBC News Somali
Isu soo baxyada ayaa ka dhacaya dalka oo dhan
Sawirka gabadha la faraxumeeyey kama arag baraha bulshada. Magaca saxda ee gabadhaasi dhibka loo geystayna wargeyska kama akhrinin. Balse dalka Myanmar oo dhan waxaa laga hadal hayaa gabdha yar iyo fal-dambiyeedka kufsiga ee loo geystay.
Kiiska Victoria ayaa dalka Myanmar oo dhan mideeyey.
Subaxnimadi 16-ka May, gabar yar oo laba jir ayaa aaddaysa goob lagu xannaaneeyo oo gaar loo leeyahay oo carruurta yaryar oo aan da'da waxbarashada gaarin oo ku taallo Nay Pyi Taw. Galabnimada maalintaasi marka ay gurigooda ku soo noqotay waxay waaliddiinteeda ay booliska u sheegeen in la Kufsaday.
Sida uu dhigayo sharciga magaca saxda ee gabadha lama shaacinin balse xubno u ololeeynaya iney gabadhan caddaalad hesho ayaa ula baxay "Victoria".
Gabadhaasi xadgudubka jinsiga ee aadka u foosha xun loo geystay waxaa ka dhalatay su'aalo badan oo la xiriira badbaadinta carruurta iyo xadgudubyada jinsiga ee dalka ka dhaca sida ay wax noqon karaan marka ay weynaato gabadhaasi yar iyo kuwa la midka ah.
'Dugsiga ay wax ka baraneysay iyo waxa ka dhacay'
Shaqsiga keli ah ee falkaasi faraxumeynta looga shakisan yahay waxaa maxkamadda la soo taagay Arbacda, waaliddiinta Victoria ayaa filayey iney garsoorayaasha la hadlaan.
Balse marki kiiska la furayba waxaa lagu sheegay inaan caddeymo buuxa loo haynin wax badanna ay isku qasan yihiin.
Booliska waxay sheegeen in baaritaan caafimaad lagu sameeyey kaddib marki ay waaliddiinta ay booliska ku soo wargeliyeen dhibka loo geystay waxayna geeyeen isbitaal waxaana baaritaanka lagu ogaaday in kufsi loo geystay.
Aabbaha dhalay gabadha xadgudubka jinsi loo geystay oo BBC Burma u warramay wuxuu sheegay muuqaal laga helay kaameerada CCTV oo bannaanka dugsiga gabadha lagu kufsaday waxaa lagu arkayaa ninka kufsiga looga shakiyey gabadha yar oo ku sii socoto. Waxayna aabbaheed u sheegtay inuu ninkaasi dhib uu u geystay.
Xigashada Sawirka, Supplied
Kaamerada CCTV oo muujineyso qofka falkaasi looga shakiyey
Booliskana waxay sheegeen iney u suuragelin iney Victoria la hadlaan oo ay daweyn u socoto isla-markaana aabbaheed uu u sheegay iney gabadha xilli kale wareysi la yeelan doonaan.
Waxayna Booliska markiba gacanta ku soo dhigeen ninki falkaasi looga shakisanaa.
30-ka bisha May waxay booliska gacanta ku soo dhigeen darwal dugsigaasi ka shaqeynayey oo lagu magacaabo Aung Kyaw Myo ama Aun Gyi, inkasta oo ay marki dambe booliska sii daayeen marki ay sheegeen in loo waayeey wax caddeyn ah.
Kiiskan ayaa dalka oo dhan mudaharaadyo ku gilgilay
Qaar ka mid ah dadka isticmaalo barta Facebook ayaa billaabay olole ka dhan ah kufsigaasi iyaga oo weliba dowladda ka dalbanaya caddaalad iney hesho gabadhaasi yar. Kiiskan ayaa soo jiitay dareenka shacabka Myanmar oo dhan.
Laba toddobaad kaddib Wasiirka caafimaadka iyo ciyaaraha Win Ko Ko Thein ayaa diyaariyey bog looga ololeynayo oo loogu magacdaray "Victoria waxay u baahan tahay caddaalad".
30-ka bisha June afhayeen u hadlay Aung San Suu Kyi wuxuu sheegay in dowladda looga fadhiyo iney tixgeliso codsiga shacabka "oo ay baaraan ilaa ay runta ka soo baxeyso".
Shacabka waxay booliska ka dalbanayaan inuu wax ka qabto kufsiga carruurta loo geysto ee sii badanaya
Caddaalad miyaa sidan?
Waddanka ay musuqmaasuqa iyo caddaalad darrada ragaadiyeen ayaa xafiiska xeer ilaainta dalkaasi laga filayaa inuu sarreynta sharciga uu meel mariyo.
Nin Hindiya caan ka ah oo lagu helay kufsi
Mudaharaadyada ugu badan ee dowladda looga dalbanayo iney tallaabbo ka qaaddo ciddi falkaasi ka dambeysay oo si ballaaran uga dhacay caasimadda dalka Myanmar, waxay sida oo kale mudaharaadyo kooban ay ka dhaceen dalka qaybahiisa kala duwan.
Macallimad Hnin Nu iyo macallimiinta kale waxay rumeysan la'yihiin waxa meesha ka dhacay
Macallimad Hnin Nu oo BBC u warrantay waxay sheegtay Aung Gyi in sagaal jeer ka badan maxkamad la hor geeyey maxkamadduna sheegtay inaan wax caddeyn ah lagu helin.
"Suurtagalna ma aha arrinkaasi ninkan inuu dambigaasi galay kaameerada CCTV ayey ka muuqataa. Annagu haddaan nahay macalliminta waxaan garab taagannahay ardaydannada" ayey tiri Hnin Nu.
Macallin kale oo isna lagu magacaabo Nilar Aye, wuxuu sheegay iney Victoria maalintaasi isha ku dhufan. Maamulaha iskuulka gabadha yar ay dhiganeysay oo ay BBC-du la hadashay waxay diidday in gabadhaasi loo geystay kufsi.
'Waxaan rabaa inaan runta ogaanno'
Maalin kaddib marki eedda kufsiga ay soo baxday, Dugsiga xannaanada carruurta ee ay Victoria dhiganeysay iyo lix xaruumood oo kale ayaa albaabbada loo xiray.
Aabbaha Victoria dhalay wuxuu sheegay ilaa iyo hadda iney jirin cid qoyska la soo xiriirtay oo taageero la talin, raalli gelin iyo maareynta dhibka dhacayba iney la kulmin.
Hase yeeshee, aabbaha gabadha dhalay wax dhaleeceyn toos ah uma soo jeedin baaritaanka ay boolisku wadaan, balse wuxuu BBC u sheegay muuqaallada qaarkood iney la lumiyey taasina ay kiiska inuu caddaalad helo ay sii adkeyneyso.
"Waxaan rabaa inaan runta arko, marnaba kama gaabinayo dacwadda kiiska gabadheyda dhibbanaha ee xadgudubka loogu geystay" ayuu yiri.
Goob joogayaal caalami ah kiiskan u kuur galay waxay sheegeen kiiska waxa loo fududeysatay ee loo daboolayo iney dhici karto iney garsoorayaasha ay laaluush qaateen ama amar laga soo siiyey saraakiisha sare ee booliska ama ciidamada.
Waddanka Myanmar waxaa muddo ku dhaw nus qarni ka arrimiya mulatari diktaatooriyad ku dhisan oo sababay iney dhibaatooyin kala duwan dalkaasi ka dhacaan, iyada oo ay dhibaatooyinka qaarkood ay weli caddaalad helin.
Hoggaamiyaha Iiraan oo ku hanjabay duqeynta Trump oo golf ciyaaraya